Ethiopia: Nabad ka dhalata Somalia, waa nabadda Ethiopia - Caasimada Online
Home Warar Ethiopia: Nabad ka dhalata Somalia, waa nabadda Ethiopia
Ethiopia: Nabad ka dhalata Somalia, waa nabadda Ethiopia
London (Caasimada Online) Dowladda Ethiopia ayaa sheegtay nabad ka dhalata Soomaaliya in ay tahay nabadda dalka Ethiopia.
Wasiiirka arrimaha dibedda dowladda Ethiopia oo hadda ku sugan magaalada London ee dalka Britan ayaa sheegay in Soomaaliya hadda waxoogaa isbadal uu ka jiro, laakin loo baahan yahay siddii loo adkeen lahaa.
Wasiirka ayaa yiri “ Haa Ethiopia nabad ayey u baahan tahay nabad Soomaaliya ka dhacdana waa nabad Ethiopia, dhibaatada gobalka Soomaalida waxan u heesanaa in tahay mid gudaha Ethiopia ah iyo mid dibedda ah labadaba , waxan isku dayeenaa in aan wax ka qabano ”
Wuxuu sheegay in horrey ay heshiis ula gaareen jabhada ugu wayn dalka Ethiopia ururka ONLF oo uu shegeay in ay wadahadal la yeesheen si loo soo afjaro dhibaatada ka jirta gobalka Soomaalida ee dalka Ethiopia.
Wasiirka ayaa sheegay in ciidamo badan ay hadda ka joogaan Soomaaliya kuwaasoo gacan siinaya dowladda Soomaaliya iyo ciidamada midowga Africa ee AMSIOM.
Wuxuu sheegay in dowladda Ethiopia ay diyaar u tahay siddii ay gacan uga geesan lahayd nabadeeda dalka Soomaaliya.
Ugu dambeyn wasiirka ayaa sheegay in Soomaaliya ay u baahan tahaay kaalmo dibedda ah, sidaas darteedna loo baahan yahay in la caawiyo.
Dowladda Ethiopia labo jeer ayaa Soomaaliya ciidamo u soo dirtay waa sanadkii 2006-da oo ay kula dagaalantay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya midowgii maxkamaddaha islaamiga iyo hadda oo gacan ay siineyso AMISOM.